Global Voices teny Malagasy · 8 Marsa 2011
08 Marsa 2011
Tantara tamin'ny 08 Marsa 2011
Jordaia: Tiako i Jordania Satria …
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Marsa 2011
Rivotra niaina atao amin'ny tontolonìny Twitter Jordaniana ny fitiavana satria nivadika ho lisitra nivezivezy ilazan-dry zareo ny antony itiavany ny fireneny tamin'ny alalan'ny tenifototra #ILoveJordan. Betsy Fisher nifantina sasantsasany tamin'ireny fanehoan-kevitra ireny.
Amman: Marika Famoronana Ho Amin'ny Fanovàna Tanatin'ny Hetsi-panoherana Tao Amman
Mbola nisy hetsi-panoherana hafa indray ny andro zoma nitaky fanavaozana tao Jordania natao tao afovoan-tananan'i Amman androany (4 Martsa). Taorian'ny herinandro izay nahitana fahadisoam-panantenan'ny rehetra nohon'ny lahateny nataon'ilay praiministra voatendry vao haingana sy ny fanambarana tsy nahafa-po sy nandranitra nataon'ireo ministra teo aloha sy ny mpikambana tao amin'ny antenimieran-doholona, dia...
Ejipta: Findain'i Ayman Nour nisy nangalatra sy Tweet tsy izy
Ayman Nour, izay isan'ireo nifaninana ho filoham-pirenena Ejiptianina tamin'ny taona 2005, dia nandefa ity tweet manaraka ity ny Asabotsy 5 Febroary, teo amin'ny 3 ora maraina teo ho eo: @ayman_nour: قراري الأخير : لن أترشح لرئاسة الجمهوريه وأفضل الدكتور محمد البرادعي رئيسا للجمهوريه الفترة القادمه لأن هذه الفترة تحتاج لرجل...
Namoaka fanambarana mandrara ny hetsi-panoheram-bahoaka ny ofilan-kevitr'ireo pretra.Nahatonga fihetsehim-po mifofofofo be avy amin'ireo mpitoraka tweeter Saodianina izany fanambarana izany.
Ogandà: vonjeo ny Mozean'i Ogandà
Afrika Mainty08 Marsa 2011
Miorina ao Kampala ny Mozean'i Ogandà, tranom-bakoka ara-poko, ara-tantara ary ireo nentin-drazana mikasika ny lova navelan'ny kolontsainan'i Ogandà. Niorina tamin'ny taona 1908 izy ity. Vao haingana ny minisitry ny fizahantany, ny varotra ary ny indostria no nanome fahazoan-dalana hanorina tranobe misy rihana 60 eo amin'ny faritry ny tranom-bakoka ho fiasan'ny...